Qoysas Horleh Oo Kasoo Barakacay Deegaanka Jannaale Ee Sh/hoose – Goobjoog News
Wararka ka imaanaya deegaanka Jannaale ee gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in qoysas horleh ay kasoo barakaceen deegaankaasi, kadib dagaallo halkaasi ku dhexmaray ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab.
Wariyaha Goobjoog ee Sh/hoose Muuse Cabaas ayaa soo sheegaya in dadka kasoo barakacay Jannaale ay kala aadeen magaalooyinka Muqdisho, Marka iyo Afgooye.
In ka badan 20 qoys ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay soo gaareen degmada Afgooye, kuwaasi oo ay ka muuqatay xaalad adag oo dhanka nolosha ah.
Dadka soo barakacay ayaa kuu sheegaya iney u adkeysan waayeen abaabulka ciidan ee ay kala wadaan dowladda Federaalka iyo Al-shabaab, iyo sidoo kale dagaallo ka dhaca deegaankaasi.
Todobaadkii tagey dagaal u dhaxeeyey ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Jannaale ee Shabellaha Hoose, waxaana dagaalladaasi ay geysteen khasaare kala duwan.
Wasiirka Gaashaandhiga Oo Kismaayo Kulamo Kula Qaadanayo Mas’uuliyiin iyo Saraakiil Ka Mid Ah Jubbaland
Ytqqsm ilcnfi cheap viagra generic cialis prices
Ctfftg fhnkug canadian pharmacy canadian pharmacy online
Hixpmx kxzzke canada pharmacy Sxran
Muhiimadda Ay Leedahay Dhismaha Wadada Wadnaha Ee Muqdisho
https://cialinic.com/ - tadalafil 10mg from canada...
https://cialinic.com/ - otc cialis 2019...
dosage prednisone sinus infection prednisone online buy how...
cialis side effects feqsbyyn http://edcheapgeneric.online/ h...
lasix iv drug lasix pills for sale lasix booster pill...